Ny fanamby ataon'ny mpitantana ny haran-dranomasina dia tsy hoe manapa-kevitra fotsiny hoe inona ny paikady hampiharina amin'ny toe-javatra iray, fa ny fanombanana na fandrefesana ny fahombiazan'ireo paikady ireo sy ny fampifanarahana azy ireo raha tsy tratra ny vokatra irina.
Fandrefesana ny fahombiazany sy fitantanana adapta fototra amin'ny fandrindrana sy fitantanana mahomby. Ny fandrefesana ny fahombiazan'ny hetsika fiarovana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso sy ny fanombanana dia afaka manome fototra ho an'ny fianarana lesona, mamaritra ny paikady ho avy ary ny fampivoarana ny programa. Ohatra, mba hahatratrarana ny faharetan'ny haran-dranomasina, ny mpitantana eo an-toerana dia tsy maintsy mamaritra ny halehiben'ny fiasan'izy ireo ary afaka mamantatra hoe nahoana no mahomby ny hetsika sasany fa ny hafa tsy mahomby.
Maka famakiana GPS hanamarihana toerana iray ho fanaraha-maso. Sary © Tim Calver
Ny fandrefesana ny fahombiazany dia hanampy hamantatra ny tombotsoan'ny fandaharan'asa na tetika sy ny fiantraika kasaina ary hanazava raha mahatratra ny fiantraika nokasaina ny paikady. Amin'ny ankapobeny, ny fandrefesana ny vokatra dia afaka manampy:
Fantaro ireo fomba mahomby - izany dia manampy amin'ny famaritana ny hetsika tokony hotohizana sy hatsangana ny mpitantana. Ny fanao sasany dia mety ovaina sy adika ho an'ny programa na hetsika hafa mifototra amin'ny vokatra.
Fantaro ireo fanao mila fanatsarana - Ny hetsika sasany dia mety mila ovaina mba hanatsarana ny fahombiazan'ny programa fitantanana.
Omeo lanjany ho an'ny mpamatsy vola sy mpanolotsaina – Fantatry ny mpamatsy vola fa ilaina ny manara-maso ny fahombiazan'ny fandaharan'asa, ary ny fahafahan'ny famatsiam-bola ho avy dia miankina matetika amin'ny fahaizan'ny mpitantana mampiseho ny fahombiazan'ny fandaharan'asa sy ny hetsika.
Jereo ny Fianarana an-tserasera momba ny haran-dranomasina Coral Reef Lesona 4: Fanombanana sy fanaraha-maso ny vatohara sy ny Fanaraha-maso sy fanombanana fizarana ho an'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny fomba famolavolana sy fanatanterahana ny ezaka fanaraha-maso sy fanombanana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCourses Demystified Online Course (misoratra anarana amin'ny ConservationTraining.org)
Course Online Resilience Coral Reef, lesona 4: Fanombanana sy fanaraha-maso ny vatohara ary lesona 6: Paikady fitantanana ho an'ny faharetana